Sawirro: Farmaajo oo gaaray magaalada KINSHASA - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Farmaajo oo gaaray magaalada KINSHASA
Sawirro: Farmaajo oo gaaray magaalada KINSHASA
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha muddo xileedku ka dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada Kinshasa ee caasimadda dalka Jamhuuriyadda Dimqoraadiga ah ee Congo, halkaas oo booqasho labo maalmood ah ay uga bilaabantay.
Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee N’djili kusoo dhoweeyey Madaxda Dalkaas, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay Villa Somalia.
Madaxtooyada ayaa sidoo kale sheegtay in safarka Madaxweynaha uu ku qotomo kor u qaadidda iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal iyo midka heer qaaradeed ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ciribtirka fakhriga iyo xagjirnimada.
Diblumaasiyiinta ku wehelinaya safarkan Farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin Koongo waxa ay kulan-doceedyo la qaadan doonaan dhiggooda dalkaas iyo Madax kale oo ka tirsan Midowga Afrika.
Safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee Farmaajo uu dalka kaga baxo tan iyo markii uu muddo xileedkiisa uu dhammaaday 8-dii Febraayo iyo toddobaad kadib markii uu laba sano ku darsaday.